Otu esi ahazi njikọ WiFi nke Raspberry Pi na-agbanyeghị na bọọdụ | Akụrụngwa n'efu
Etu ị ga-esi hazie njikọ Raspberry Pi WiFi na-agbanyeghị na bọọdụ
Afọ akwụkwọ ọhụrụ amalitela ma n'ezie, ọtụtụ n'ime gị na-amalite Raspberry Pi n'okpuru aka gị ma ọ bụ karịa n'etiti akwụkwọ ọhụrụ. Taa, anyị ga - agwa gị ntakịrị aghụghọ iji mee ka buut mbụ nke Pipe ọsọ ọsọ nwee njikọ Wi-Fi nke ụlọ ahụ na-enweghị njikere ịbanye data ọhụrụ, okwuntughe, wdg ...
Maka nke a naanị anyị chọrọ kọmputa nwere Windows ma ọ bụ Linux, microsd kaadị, njikọ Wi-Fi na bọọdụ Raspberry Pi 3. Ihe ndị anyị niile nwere n’aka ma ọ bụ nwee ma ọ bụ nwere ike ịdị nfe.
Ozugbo anyi mechara ihe ndia. Anyị na-ewebata kaadị microsd na Windows pc na anyị na-echekwa onyonyo Raspbian na kaadi microSD. Anyị nwere ike ime ya na mmemme dịka Etcher, nke abụghị naanị maka Windows kamakwa maka Ubuntu na macOS.
Ozugbo anyịdekọtara ihe oyiyi Raspbian, anyị na-ewepu kaadị ahụ ma tinyeghachi ya na Windows, na-egosi faịlụ niile edere na kaadị microSD. N'ime / buut nkebi anyị ga-agbakwunye faịlụ abụọ: SSH na wpa_supplicant.conf.
Faịlị nke mbụ ga - emepe oghere ma ọ gaghị enwe ndọtị. Ọ bụrụ na Windows agbakwunye ndọtị .txt, anyị ga-ehichapụ ya. Banyere faịlụ wpa_supplicant.conf, nke a anyị nwere ike ịmepụta ya na Notepad ọ ga-enwerịrị ederede na-esonụ:
Na oghere raara nye SSID na PSK anyị ga-agbakwunye aha netwọk ma ọ bụ rawụta na paswọọdụ nke rawụta. Anyị na-echekwa ozi a ma anyị nwere Raspbian microsd kaadị dị njikere. Ugbu a, anyị ga-etinye kaadị n'ime Rasberi Pi anyị na ngwanrọ ga-ejikọ bọọdụ Rasberi Pi na njikọ Wifi anyị, na-eme ka ọ dịkwuo mfe imelite na ịwụnye mmemme anyị chọrọ.
Isi mmalite - Utu maka ntugheriukwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Etu ị ga-esi hazie njikọ Raspberry Pi WiFi na-agbanyeghị na bọọdụ